“तपाईंको सबैभन्दा प्यारो र धेरै समय बिताउने ठाउँ कुन हो ? पक्कै पनि सुत्ने कोठा नै दिमागमा आउँछ । किनभने सुत्ने कोठामा हामीले दिनको २४ घण्टामध्ये कम्तीमा पनि ६ घण्टा बिताउँछौँ ।” “”जहाँ हामी सबै तनाव र थकान भुलेर निदाउँछौँ । तर कतिपयलाई भने कुनै सुत्ने कोठाकै कारण पनि निद्रामा समस्या पर्न सक्छ । यदि तपाईंलाई निद्रामा समस्या छ भने एकपटक वास्तुतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको दुर्गा ज्योतिष केन्द्रका ज्योतिषी दुर्गाप्रसाद शर्माले बताए ।” वास्तु दोषको कारण पनि निद्रामा समस्या हुने उनको ठहर छ । घरको वास्तुले हाम्रो दैनिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने हुनाले यस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको सल्लाह छ । उनका अनुसार सुत्ने कोठा शान्त सुन्दर अनि मिठो निद्राका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।”
१. “कैयाैं अवस्थामा हामीले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सजिलो होस् भनेर सुत्ने कोठामै फ्रिज, ग्यासजस्ता सामान राख्ने गर्छाैं। यस्ता वस्तुलाई कोठाबाहिर राखेमा राम्रो निद्रा पर्छ । (वैज्ञानिक कारण, सुत्ने कोठामा विद्युतीय तथा चुम्बकीय वस्तु राख्दा स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ”
२. “कतिपय व्यक्तिले लापरबाही गर्दै आफू सुत्ने खटिया घरको जुनसुकै दिशामा राख्ने गर्छन् । जसको कारण रातको समयमा राम्रो निद्रा लाग्दैन । उत्तर दिशामा टाउको र ढोकातर्फ खुट्टा राखेर सुतेमा वास्तुदोष लाग्छ । (वैज्ञानिक कारण, पृथ्वीको चुम्बकीय गुणको कारण उत्तर दक्षिण शरीर पारेर सुत्नु हुँदैन”
४. “सुत्ने कोठा खुला तथा सामान्य हुनुपर्छ । कोठा धेरै गन्जागोल राख्नु हुँदैन ।५. घरको डिजाइन गर्दा कोठामा चार कुनाको सट्टा पाँच कुना राखेमा, त्यस कोठामा सुत्दा समस्या हुन सक्छ ।”
६. “रातको समयमा पानी पिउने बानी छ भने, पानीको बोतल तथा गिलास बेड नजिक नराख्नुस् । यसले सुत्दा बेचैन महसुस हुन्छ ।”
७. “सुत्दा पूर्व दिशातर्फ शिरानी राखिनु पर्छ । साथै कोठाको झ्याल ढोका आवाज नआउने हुनुपर्छ ।अधिकांश घरमा सुत्ने खाट वा पलङमुनि विभिन्न चिज राख्ने चलन हुन्छ । तर यस्तो गर्नु वास्तु शास्त्रको दृष्टीले खराब मानिने शर्माको भनाइ छ । सकेसम्म सुत्ने बेडको मुनी राख्ने चिजको विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । खासगरी केही चिज त पलङमुनि राख्नै नहुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ ।” शयनकक्षमा विभिन्न वास्तु दोष हुने हुँदा मानिसलाई निद्रा नलाग्ने र अन्य समस्या आउने बताइन्छ । यसका लागि पनि सुत्ने पलङमुनि राख्ने सामानको विषयमा विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।”
“सुत्ने पलङमुनि गह्रौं वस्तु नराख्नुस् । यसले पलङमुनि फोहोर मात्र गर्दैन । वास्तुको हिसाबले तपाईंलाई तनाव पनि दिन्छ । धातुका सामग्री पनि सुत्ने पलङमुनि राख्नु हुँदैन । खिया लाग्ने चिज सुत्नेस्थलमा हुनु घातक मानिन्छ । सुत्ने पलङमुनि फोहोर पनि राख्नु हुँदैन । पलङमुनि फोहोर हुनु पनि नराम्रो मानिन्छ । सुत्दा ओड्ने च्यादर वा सिरानी पनि फोहोर हुनु नराम्रो मानिन्छ ।”
“यदि सयन कक्षमा ढोका छ भने त्यसलाई बन्द नै गरेको राम्रो मानिन्छ ।यी चिजहरुले अविवाहित व्यक्तिको मनमा पनि विभिन्न नकारात्मक भावना आउने र गलत कार्य गर्ने खतरा रहेको वास्तु शर्माको दाबी छ । विवाहपछि पनि यस्ता कुराले विभिन्न समस्या ल्याउन सक्छ । वास्तु शास्त्र सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जाको सिद्धान्तमा आधारित हुने उनको भनाइ छ । शर्माका अनुसार नकारात्मक ऊर्जा हुने गरी सामानहरु राखियो भने मनमा तनाव हुने र शारीरिकरूपमा पनि असहजता पैदा हुने गर्छ । सकारात्मक ऊर्जाका लागि पनि वास्तुमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।”
“छोरा–छोरीको विवाह भएन भने पनि पलङमुनि राखिएका वस्तु हटाउँदा उनीहरुको विवाह हुने दाबी वास्तु शास्त्रीहरुको छ ।ज्योतिष भूषण भरतमणि आनन्दका अनुसार सुत्ने स्थानमा हामीले जीवनकै एकतिहाई समय बिताउने भएकाले आवास निर्माण गर्दा निकै ध्यान पु-याउनुपर्छ । वास्तु शास्त्रका अनुसार सुत्ने कोठाको दिशा, पलङ तथा सुत्ने तरिका मिलेन भने मानिस मानसिक रूपमा कमजोर हुने, आर्थिक रूपमा असफल हुने, अनि शारीरिक रूपमा रोगी हुने उनको ठम्याइ छ । यदि कोही मानिस वास्तु शास्त्रको मान्यताविपरीत गलत दिशामा रहेको कोठामा सुत्छ भने उसको जीवनमा नकारात्मक प्रभावहरुले असर गर्न थाल्छ ।”
” कार्य क्षेत्रमा नकारात्मकता प्रभाव हावी हुने, स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरुले चिन्तित बनाउने छ भने पारिवारिक सम्बन्ध गडबड हुन थाल्ने आनन्द बताउँछन् ।घर निर्माण गर्दा नै सही दिशामा मुख्य शयन कक्ष बनाउनु लाभदायी हुने तर निर्माण गर्दा उचित व्यवस्थापन नभएमा निश्चित उपचारले त्यसलाई वास्तु उपयोगी बनाउन सकिने बताउँछन् अर्का ज्योतिष रामप्रसाद सुवेदी । घरमूलीका लागि आफ्नो शयन कक्ष दक्षिण–पश्चिम दिशामा बनाउनु अत्यन्तै उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।”
“यो स्थान कामदेवबाट प्रभावित भएकोले यस क्षेत्रमा मुख्य शयन कक्ष उपयोगी हुने वास्तुशास्त्रीय मान्यता छ । यो ठाउँमा बनाएको कोठामा दक्षिणतर्फ सिरानी गरी घर मूली सुत्ने गर्दा त्यसले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने विश्वास छ ।त्यसैगरी ऊर्जावान् दम्पतीहरुका लागि पनि वास्तु शास्त्रले सुत्नका लागि दक्षिण–पश्चिम या उत्तर–पश्चिमको दिशामा रहेको कोठालाई उपयुक्त मानेको छ । यी स्थानमा भएको शयन कक्षले नयाँ विवाहित जोडीको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँछ भन्ने सुवेदीको ठहर छ । वास्तुशास्त्रले बालबालिकाहरुका लागि पूर्वको कोठालाई उचित मानेको छ भने पाहुनाहरुका लागि उत्तर–पश्चिम दिशाको कोठा उपयुक्त बताएको छ ।”
“पाहुना धेरै दिन रहँदा घरको वातावरण उपयुक्त नहुने भएकोले उत्तर–पश्चिम दिशामा सुत्ने व्यवस्था मिलाएमा लामो समय बस्दैनन् भन्ने वास्तुशास्त्रको मान्यता रहेको छ।हिजोआज घर सुन्दर बनाउनका लागि थरिथरिका इन्टेरियर डेकुरेसन गर्ने चलन छ । तर ती घरहरु पनि वास्तुअनुसार बनाएर डेकुरेसन गर्ने गरेको एआरसी इन्टेरियर डिजाइन गु्रप्स, बानेश्वरका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश ताम्राकारले बताए ।
“उनले भने, हामी पनि घरका, सुत्ने कोठाका, किचनका डेकुरेसन गर्छौँ, ती सबै काममा वास्तुको मद्दत लिन्छौं ।” ताम्राकारका अनुसार, सुत्ने कोठामा पुग्दा सबै थकाइ मेट्ने खालको बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि विभिन्न डेकुरेसनका सामान प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नागरिक न्युज ।